कसरी सफलतापूर्वक VoIP कार्यान्वयन गर्न - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
कसरी सफलतापूर्वक VoIP कार्यान्वयन
सम्पादकको पिक मार्च 21, 2021 अप्रिल 16, 2021 Tracie Johnson B2B, ब्लग, व्यापार, सम्पादकको पिक, ग्लोबल थोक अनलाइन, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
तपाईंको व्यवसाय वीओआईपी प्रदायकहरूसँग छलफल गर्न पोइन्टहरू तयार गर्दा तपाईंको प्रश्नहरूको राम्रो जवाफ दिन मद्दत गर्दछ।
वीओआईपी प्रदायकसँग सयौं सुविधाहरू छन्, र के मार्केटमा वर्तमानमा उपलब्ध छ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ।
VoIP अझै नयाँ प्रविधिको साथ, प्रायः व्यवसायहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको लागि तयार छैनन्।
ब्यापार वीओआईपी अपनोपनले बढ्दो उत्पादकत्वको बखत उनीहरूको फोन बिलहरू कम गर्न आवश्यक पर्ने थप संगठनहरूको साथ बढिरहेको छ। सहि VOIP सेवाहरूको साथ तपाईंको व्यवसायको आवश्यकताहरू पूरा गर्न, तपाईं सजिलैसँग आफ्नो संचार लागत costs 84% ​​सम्म खरीद गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईंसँग पहिले VoIP अनुभव छैन भने, कार्यान्वयन धेरै चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै टेक्निकलिटीहरू सामिल छन्, र तपाईंलाई कहाँबाट सुरु गर्ने विचार हुँदैन।
एक साधारण VoIP कार्यान्वयन चेकलिस्ट तपाईंको प्रवास प्रक्रिया सजिलो बनाउँदछ।
धेरै VoIP प्रणालीहरू विद्यमान क्लाउड प्लेटफर्महरूमा एकीकृत गर्न सकिन्छ कार्य प्रक्रियाहरू सजिलो गर्न।
१. तपाईको फोनको आवश्यकताको मूल्यांकन गर्नुहोस्
तपाईंको व्यवसाय वीओआईपी प्रदायकहरूसँग छलफल गर्न पोइन्टहरू तयार गर्दा तपाईंको प्रश्नहरूको राम्रो जवाफ दिन मद्दत गर्दछ। यसले तपाईंको योजनालाई सजिलो बनाउँदछ। आफैलाई यी प्रश्नहरू सोध्नुहोस्।
के तपाईंको व्यवसायमा बारम्बार सम्मेलन कल हुन्छ?
के तपाईंलाई अन्तर्राष्ट्रिय कल गर्न आवश्यक छ?
के तपाईंसँग टिम सदस्यहरू छन् जुन तपाईंको फोन लाइनहरूमा टाढाको पहुँच चाहिन्छ?
२. आवश्यक VoIP सुविधाहरूको सूची बनाउनुहोस्
कुनै पनि निर्णय अघि तपाईंको सबै आवश्यकताहरूको एक विस्तृत सूची महत्त्वपूर्ण छ। सूचीले सर्वश्रेष्ठ प्रदायक र यसका सुविधाहरूमा निर्णय लिन मद्दत गर्दछ। वीओआईपी प्रदायकसँग सयौं सुविधाहरू छन्, र के मार्केटमा वर्तमानमा उपलब्ध छ भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण छ। लोकप्रिय सुविधाहरू समावेश:
सबै सुविधाहरू सूचीबद्ध गर्नुहोस् जुन तपाईंलाई रूचि छ, तिनीहरूको महत्वबाट तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्दै। आवश्यक सुविधाहरूको जानकारीले तपाईंलाई छिटो, अधिक सूचित निर्णय लिन सक्षम गर्दछ।
Cloud. कुन क्लाउड प्लेटफार्महरू तपाईंको व्यवसाय द्वारा प्रयोग गरिन्छ
यसको सूचीकरणको कारण यो छ कि धेरै VoIP प्रणालीहरू विद्यमान क्लाउड प्लेटफर्महरूमा एकीकृत गर्न सकिन्छ कार्य प्रक्रियाहरू सजिलो गर्न। जबकि आवश्यकता छैन, वीओआईपी कलहरू सीआरएम, हेल्पडेस्क, र बिक्री प्लेटफर्महरूसँग एकीकृत हुन सक्छ। यी क्लाउड-आधारित अनुप्रयोगहरू छन् जुन तपाईंलाई अधिक व्यवस्थित बनाउँदछ र तपाईंलाई सूचित गर्दछ।
एकीकरणको बारेमा सोध्नुहोस् जब उपलब्ध VoIP आपूर्तिकर्ताको जाँच गर्न को लागी उनीहरू के प्रस्ताव गर्छन्।
S. निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको नेटवर्क VoIP तयार छ
VoIP प्रणालीहरू मात्र इन्टरनेट मा काम गर्दछ। यस कारणका लागि तपाईसँग एउटा नेटवर्क हुनु पर्छ जुन VoIP फोनहरू समर्थन गर्न सक्दछ। VoIP संचार तपाईंको नेटवर्कमा स्ट्रीमि movies चलचित्रहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ र ब्यान्डविथ-गहन हुन सक्छ। तपाईंको नेटवर्कको परीक्षण गर्नुहोस् यो निश्चित गर्नका लागि कि यो व्यापारमा चालू रहेका अन्य अनुप्रयोगहरूद्वारा ढिलो छैन।
VoIP प्रणालीहरू मात्र इन्टरनेट मा काम गर्दछ। यस कारणका लागि तपाईसँग एउटा नेटवर्क हुनु पर्छ जुन VoIP फोनहरू समर्थन गर्न सक्दछ।
Inf. पूर्वाधारको कमीहरूलाई सुदृढ पार्नुहोस्
VoIP अझै नयाँ प्रविधिको साथ, प्रायः व्यवसायहरू प्रत्यक्ष कार्यान्वयनको लागि तयार छैनन्। प्रणालीको स्थापना हुनु अघि तपाईंको नेटवर्क पूर्वाधारमा अपग्रेडहरू आवश्यक पर्दछ। तपाईंको ईथरनेट केबलहरू श्रेणी c केबलहरूमा अपग्रेड गर्न आवश्यक पर्दछ। तपाइँसँग असंगत डेटा स्ट्रिमहरू ह्यान्डल गर्नका लागि जिटर बफर पनि स्थापना गर्नु पर्छ। जिटर बफरले तपाइँको VoIP कलहरूको लागि सहज र सुसंगत गुणवत्ता सुनिश्चित गर्दछ।
त्यहाँ VoIP डाटाका लागि समर्थनका साथ बजारमा विशेष VoIP- अनुकूलित राउटरहरू छन्। यसले अन्य नेटवर्क गतिविधिमा कुनै प्रभाव पार्दैन र सँधै VoIP डाटालाई प्राथमिकता दिन्छ।
यदि त्यहाँ तपाईंको VoIP फोनहरू समर्थन गर्न पर्याप्त पावर आउटलेटहरू छैनन् भने, पावर ओभर इथरनेट (PoE) को प्रयोग गरेर तपाईंको फोनहरूमा एकल जडानमा इन्टरनेट र पावर दुबै ल्याउन सक्छ। तपाईंको पूर्वाधारको तयारीले तपाईंलाई कार्यान्वयनको लागि तयार बनाउँछ, र यो एक ठाउँमा हुन्छ भने, तपाईं VoIP फोन प्रणाली प्रदायकहरूको खोजी गर्न सक्नुहुन्छ।
Your. तपाइँको प्रदायक चयन गर्नुहोस्
केवल यसका लागि जानुहोस् VoIP प्रदायक त्यो तपाइँको आवश्यकताहरु पूरा गर्दछ। प्रदायकले तपाइँलाई नि: शुल्क परीक्षण, BYOD नीति, र कुनै सम्झौताको विकल्प पनि प्रदान गर्नुपर्दैन। त्यस्तै, यदि तपाइँ प्रदायकमा बाध्य हुनुहुने छैन यदि सेवा तपाइँको अपेक्षाहरूमा छैन।
सांप्रदायिक समाचार भ्वाइस इन्टरनेट प्रोटोकोल (VoIP)
Tracie Johnson एक नयाँ जर्सी मूल र Penn स्टेट विश्वविद्यालय को एक फिटकस छ। उनी लेख्ने, पढ्ने र स्वस्थ जीवनशैली बिताउने बारेमा उत्साहित छिन्। उनी साथीहरु, परिवार, र उनको Dachshund रूफस नामले घेरिएको क्याम्पफायर वरिपरि हुँदा अत्यन्तै खुशी महसुस गर्छिन्।
आयुर्वेदमा प्रतिरक्षा बूस्टिंग जडिबुटीहरू
एक अधिक समावेशी कार्यस्थल सिर्जना गर्ने पाँच तरिकाहरू